Manantena mpizahatany 2 tapitrisa i Thailand amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Manantena mpizahatany 2 tapitrisa i Thailand amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021
Manantena ny mpizahatany vahiny manodidina ny 2 tapitrisa ny governemanta Thailandy amin'ity taona ity aorian'ny fisokafan'ny nosy ireo mpitsidika vita vaksiny manomboka ny 1 Jolay.
Sambany tao anatin'ny herintaona mahery, Thaialnd dia hamela ny mpitsidika tsy hanana quarantine 2 herinandro voatery.
Vinavinain'ny governemanta ny fifanarahana vita sy ny pasipaoro fanaovana vaksinin'ny firenena maro atsy ho atsy hamela ny mpitsidika hiverina tsy mila quarantine.
Ny fizahan-tany any Thailand dia manao banky amin'ireo mpizahatany sinoa ho tonga amin'ny volana jolay ary ireo mpizahatany eropeana ho tonga amin'ny ririnina.
Ny filoham-pirenena lefitry ny fizahan-tany any Thailande Vichit Prakobgosol dia nilaza fa ny mpamaky fialan-tsasatra dia mety hampidi-bola sahabo ho 105 miliara baht amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021. Sambany izy io ao anatin'ny herintaona mahery izay avelan'ilay nosy hitsidika ireo mpitsidika tsy hanana karoketra 2 herinandro tsy maintsy atao. .
Ny VP dia nilaza fa ny Sinoa, izay vondrona lehibe indrindra mpizahatany mankany Thailand alohan'ny areti-mandringana dia antenaina hiverina amin'ny volana jolay amin'ny sidina efa niasa, raha toa kosa ireo mpitsidika avy any Eropa dia mety hanomboka ho tonga mandritra ny ririnina.
Nilaza Andriamatoa Vichit fa tsara fa ny ankamaroan'ny firenena manana vaksiny betsaka dia ny tsena lehibe ho an'ny fizahan-tany Thai, ary nilaza fa ny governemanta dia tokony hamita ny fifanarahana sy pasipaoro fanaovana vaksinin'ny firenena maro hamelana ireo mpitsidika hiverina tsy misy mila quarantine.
Thailand dia nanana hevitra vaovao hanombohana ny laharan'ny fizahan-tany ary hahatonga ny mpizahatany hitsidika ny fireneny amin'ny endrika isan-karazany ao anatin'izany ny fenitra fiarovana vaovao farany ho an'ny hetsika fitsangatsanganana. Ny sekretera maharitra misahana ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena Taweesak Wanichcharoen dia nilaza fa ny fanatsarana ny fenitra dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny fizahan-tany eto amin'ny firenena ary hampiharina voalohany amin'ny faritany enina: Chiang Mai, Phuket, Kanchanaburi, Udon Thani, Chonburi ary Bangkok.
Ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fanatanjahantena ary ny fakiolten'ny injeniera ao amin'ny oniversite Kasetsart dia niara-niasa mba hamorona fenitra fiarovana ho an'ny fizahan-tany sy ny hetsika fitsangatsanganana an-tsipika. Ny sekretera maharitra misahana ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena Taweesak Wanichcharoen dia nilaza fa ny fanatsarana ny fenitra dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny fizahantany ao amin'ny firenena. Hampiharina voalohany any amin'ny faritany 6: Chiang Mai, Phuket, Kanchanaburi, Udon Thani, Chonburi, ary Bangkok.
Andriamatoa Taweesak dia nilaza fa ny solontenan'ireo fikambanana 2 dia nanao fivoriana tamin'ity volana ity ary namorona boky torolàlana momba ny fizahan-tany mba hampihenana ny lozam-pifamoivoizana ary hananganana fifampitokisana eo amin'ireo mpizahatany sy ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany. Nilaza izy fa ny fenitra vaovao amin'ny fizahan-tany dia antenaina hampiharina aorian'ny fisokafan'ny firenena.